ဘာသာစကားတစ်ခုကို ရက် ၉၀ နဲ့ တတ်မြောက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ - Thutazone
ဘာသာစကားတစ်ခုကို ရက် ၉၀ နဲ့ တတ်မြောက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ရေးသားသူ – Myanmar Network Forum
ဘာသာစကားနှစ်မျိုး တတ်မြောက်ခြင်းသည် ကွဲပြားခြားနားသော လူအမျိုးမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးနှင့် စိတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးတို့ပါရှိသော ကမ္ဘာအသစ်တစ်ခုကို သွားရောက်ရန် သင့်ကို လမ်းဖွင့်ပေးမှာပါ။ ဒီလိုတတ်မြောက်ဖို့ကို အချိန်တွေလည်း အများကြီးပေးဆပ်ရကောင်း ပေးဆပ်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူအများစုကတော့ ဒီလောက်များပြားလှတဲ့ အချိန်တွေကို မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတတ်ကျွမ်းဖို့က ရက် (၉၀) တည်း ကြာတယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလဲ?
ပထမဆုံး ဘာသာစကား (၂) မျိုး တတ်မြောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်
ဒုတိယဘာသာစကားကို သင်ယူတဲ့အတွက် သိသာထင်ရှားလှတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ – အယ်(လ)ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကို နှောင့်နှေးစေခြင်း၊ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်း ပိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ အာရုံအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာများကိုတောင်မှ ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသိသာတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအပြင် လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေ အမြောက်အများကိုလည်းရရှိစေပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စာပွဲထိုးရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ အစားအသောက်မှာနိုင်ခြင်း၊ ဓာတ်လှေကားထဲမှာ သူများ ပြောတာတွေကို ခိုးနားထောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်းဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောသူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ပြီး သူတို့ပြောတာတွေကိုလည်း နားလည်နိုင်ခြင်းကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှု ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယဘာသာစကားကို သင်ယူတတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးသော ရလာဒ်ကတော့ နောက်ထပ် တတိယ၊ စတုတ္ထ (သို့) ပဉ္စမဘာသာစကား သင်ယူတဲ့အခါမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားကို သင်ယူခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှု မဟုတ်ပါ။ ဘာသာစကားတစ်ခုကို ဘယ်လိုသင်ယူရမလဲဆိုတာ ကို သင်ယူခြင်းကသာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါသည်။ နည်းလမ်းတွေကို သိပြီဆိုတာနဲ့ တတ်သွားတဲ့ သဒ္ဒါပုံစံတွေနဲ့ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေကို မိမိ သင်ယူတဲ့ ဘာသာစကားတိုင်းမှာ အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများစုထင်တာ မှားနေရတဲ့အကြောင်းရင်း တစ်ခုရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ စပိန်ဘာသာစကားကို နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာ သင်ခဲ့ရပြီး၊ အစိုးရစာမေးပွဲတွေမှာတောင် အဆင့်ကောင်းကောင်းရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ တကယ်ပဲ စပိန်စကားကို လက်တွေ့ပြောရတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော် သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အထက်တန်း ကျောင်းမှာ စပိန်စကားကို (၄)နှစ်တာ သင်ယူခဲ့တာတောင်မှ burrito (မက်ဆီကို ချာပါတီတစ်မျိုး)ကို မမှာတတ်သေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ မှားသွားသလဲ? တရားဝင် စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ စာမေးပွဲတွေအရတော့ ကျွန်တော်ဟာ စပိန်ဘာသာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာကျတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အစားအသောက်မှာခြင်းဆိုတဲ့ အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ငန်းလေးကိုတောင်မှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘာသာစကားကို သင့်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့ အသင်မခံခဲ့ရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေဟာ အုပ်စုလိုက် ဘာသာစကားကို သင်ယူကြပြီး လေ့ကျင့်ခန်းစာရွက်အချို့ (worksheets)နဲ့ သဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကို လုပ်နိုင်ရင်ပဲ ဘာသာစကားသင်ယူမှုဟာ လုံလောက်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ စကားပြောကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မတတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ လေ့ကျင့် ခန်းစာရွက်တွေ(workheets)တွေကို ဖြေဆိုခြင်းသည် ထိုလုပ်ငန်းအတွက်ပဲ လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ worksheets တွေကို ဖြေဆိုတဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စကားပြောကို သင်ယူချင်ရင်တော့ စကားပြောခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတွေက စာအုပ်ကတစ်ဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) ကွန်ပျူ့တာ program တစ်ခု နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ စကားပြောကို သင်ယူတဲ့အခါ ဒီနည်းနဲ့သာ သူတို့ သင်ယူနေရင် မျှော်မှန်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ပြောချင်ရင် စကားပြော ခြင်းကို လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာသာစကားတစ်ခုကို သွက်သွက်ကလေးပြောချင်ရင် အခုကတည်းက စပြီး ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးကို ပြောရမှာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာစကားကို လျင်မြန်စွာ သင်ယူနိုင်သည့် အခြေခံနည်းပရိယာယ်တစ်ချို့ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
ဘာသာစကားတစ်ခုကို သင်ယူခြင်းဟာ လန့်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသေးစိတ် မဆွေးနွေးခင် ယေဘုယျနည်းပရိယာယ်တွေကို ခြုံငုံ၍ တင်ပြပါမယ်။
အချက်အလက်တွေကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. သင်ယူမှုအတွက် သင့်တော်သော မှီငြမ်းကိုးကားစရာ စာအုပ်စာတမ်း၊ DVD၊ ရုပ်ရှင်၊ CD စသည်တို့ကို ရယူပါ။
အဲဒါတွေကတော့ သဒ္ဒါစာအုပ်ကောင်းကောင်း၊ အဘိဓာန်ကောင်းကောင်း၊ အသံထွက် CD နဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ သုတ၊ ရသ စာအုပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. သီးသန့် ဆရာတစ်ယောက် ငှားပါ။
ဆရာကို အနည်းဆုံး တစ်လလောက်တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့ကို (၄)နာရီ သင်ယူဖို့ ကျွန်တော် အကြံပြုချင်ပါတယ်။
3. တတ်နိုင်သမျှ ၎င်းဘာသာစကားနဲ့ပဲ တွေးပါ၊ ပြောပါ။
စကားလုံးတစ်လုံးကို မမှတ်မိတိုင်း ၎င်းကို ဝေါဟာရမှတ်စု စာအုပ်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။ ဝေါဟာရတွေကို နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပါ။
4. သူငယ်ချင်းများ၊ ဘာသာစကားပြောဖော်၊ ၎င်းဘာသာစကားကို ပြောသော အခြားသူများကို ရှာပါ။
ဆရာနဲ့ အခြေခံဘာသာစကားကို ပြောနိုင်ပြီဆိုရင် တခြားစကားပြောဖော်များ လိုလာပါပြီ။ မရသေးဘူးဆိုရင် ၎င်းဘာသာစကားပြောတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့ စဉ်းစားပါ။ လူအများတက်တဲ့ သင်တန်း ကို စဉ်းစားပါ။ အဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ပါ။
ဒါတွေကတော့ အခြေခံကျတဲ့ နည်းပရိယာယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပရိယာယ်တွေကတော့ ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ (၃)လအတွင်း ဘာသာစကားတစ်ခုကို သင်ယူရတာက မလွယ်လို့ပါပဲ။ အကယ်၍ အဲဒီဘာသာစကားကို (၃)လထက်ပိုပြီး ဖြည်းဖြည်းပဲ သင်ယူလိုတယ် (သို့) နိုင်ငံအသစ်ကို သွားပြီး တစ်နေ့ကို (၄-၈)နာရီလေ့ကျင့်ဖို့ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ ဒီအစီအစဉ်ကို ပြုပြင် ယူနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ လွန်စွာမှ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် ထက် တစ်နေ့ကို မိနစ် (၂၀)လေ့ကျင့်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
ဘာသာစကားသင်ယူရန် ရက် (၉၀) အစီအစဉ်
ရက်ပေါင်း(၉၀)တည်းနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ချောမွေ့သွက်လက်မှုရကောင်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် စကားပြောနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်ကောင်းမြင့်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်းအထန် အာရုံစိုက်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခုကို သင်ယူဖို့အချိန်ပြည့် အာရုံမစိုက်နိုင်ရင်လည်း ကိစ္စတော့ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်ဟာ ရက်(၉၀)ထက် ပိုကြာသွားပါမယ်။ နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သို့မဟုတ် သင် တတ်ထားတာတွေဟာ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ရက် (၃၀)
ဘာသာစကားတစ်ခု သင်ယူတဲ့အခါ ပထမရက် (၃၀)က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ကို ဒီသင်ယူမှုအထဲမှာ ပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး အပြည့်အ၀ နှစ်မြှုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရက်(၉၀)အတွင်းမှာ ဒီဘာသာ စကားကို သင်ယူ တတ်မြောက်ချင်ရင်တော့ ဒီဘာသာစကားပြောတဲ့ တိုင်းပြည်ကို သွားဖို့ ကျွန်တော် အထူးတိုက်တွန်း လိုပါတယ်။ ဒီလိုသွားခြင်းဖြင့် သင့်အနေနဲ့ ဘာသာစကားကို မဖြစ်မနေ သင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ အတွေးကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်း ဒီဘာသာစကားကိုပဲ ပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်သွားမှာပါ။ အကယ်၍ အဲဒီဘာသာစကားပြောတဲ့ နိုင်ငံကို သွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို လက်ခံမဲ့ အိမ်ရှင် မိသားစု (host family)တစ်ခုခုနဲ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒီမိသားစုနဲ့ ထမင်းလက်စုံစားခြင်းနဲ့ အများကြီး သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ – ပထမလကတော့ ဆရာနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းသင်ပါ။ လူအများတက်တဲ့ သင်တန်းကို လိုက်မတက်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆရာကတော့ သင့်ကို သင်ယူဖို့အတင်းအဓမ္မ တိုက် တွန်းမှာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်း ဆိုရင်တော့ ခိုနိုင်တယ်၊ အပျင်းထူလို့ရနိုင်တယ်။
အခုပြောမဲ့ အချက်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာသာစကားကို သင်ယူတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တိုင်က နိုးကြားထကြွပြီး ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ သင်ယူသူ (active learner) ဖြစ်ရပါမယ်။ လူအများစုဟာ ဘာသာ စကားကို အသင်တော့ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင် ကလည်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဆရာနဲ့တစ်ယောက်ချင်းသင်ယူတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ စကားစုတွေကို အများကြီးတွေ့ရမှာပါ။ ဒီစကားလုံး (သို့) စကားစုတွေကို ဝေါဟာရ / စကားစု စာအုပ်ထဲမှာ ရေးမှတ်ထားပါ။
တစ်နေ့ကို ဝေါဟာရနဲ့ စကားစု အခု ၃၀ ကို စတင်ကျက်မှတ်ဖို့ လိုပါပြီ။ ဘာ့ကြောင့် အလုံး(၃၀)ကို ကျက်ရပါသလဲ? ဒီလိုကျက်မှတ်ပါက ရက်ပေါင်း (၉၀) ပြည့်တဲ့အခါ သင်လိုအပ်တဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ စကားစုများ ရဲ့ ၈၀%ကို တတ်မြောက် သွားမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
(၃၁) ရက်မှ ရက် (၆၀)
ပထမလပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိနိုင်သလောက်ရှိဖို့ ကြိုးစား အားထုတ်ရပါတော့မယ်။ ဆရာနဲ့ တစ်ယောက်ချင်း တစ်လသင်ယူပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေဖြင့် အခြေခံ စကားပြောခြင်းကိုတော့ ပြောနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာနဲ့ သင်ရတာက အကုန်အကျများလာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်မှာ အဆင့်မြင့်သင်တန်းတက်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ ငွေကုန်သက်သာစေတဲ့ အပြင် ဒီဘာသာစကားကို ပြောတဲ့အခြားသူတွေနဲ့လည်း လက်လှမ်း မှီတဲ့ အနေအထားကို ရောက်သွားပါတယ်။ သင့်မိခင်ဘာသာစကားကို မပြောမိဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။ သင်ယူနေတဲ့ဘာသာစကားကိုပဲ ပြောပါမယ် လို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စည်းကမ်းချ မှတ်လိုက်ပါ။ တတ်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာနဲ့လည်း ဆက်သင်ပါ။
ဒီအချိန်မှာ ဒီဘာသာစကားကို ပြောတဲ့အဖေါ်ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း နာရီအနည်းငယ် ဒီဘာသာစကားကို လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဒီအချိန်မှာ စကားပြောအခြေခံကို ရသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုဟာ လုပ်ရမဲ့ ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်မဟုတ်တော့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်း အချိန်ကို ကုန်လွန်စေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင် သင်ယူနေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး မသိတဲ့ စကားလုံးတွေကို မျဉ်းသားထားပါ။ ဒီစကားလုံးတွေကို သင့်ရဲ့ ဝေါဟာရ / စကားစုစာအုပ်ထဲ ရေးထည့် နိုင်ပါတယ်။
စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း ဒီဘာသာစကားနဲ့ ပဲစဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ အတွေးတစ်ခုခုကို စကားနဲ့ ဖေါ်ပြတဲ့ အခါ သုံးရမယ့်စကားလုံးတစ်ခုခုကို မမှတ်မိပါက အဲဒီစကားလုံးကိုလည်း ဝေါဟာရ စာအုပ်ထဲရေးသွင်း လိုက်ပါ။ တစ်ရက်ကို စကားလုံး /စကားစု အလုံး (၃၀) ကိုလည်း ဆက်ပြီး ကျက်မှတ်သွားပါ။
(၆၁) ရက် မှ ရက် (၉၀)
ရက် ၆၀ ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သင့်အနေဖြင့် ဒီဘာသာစကားကို ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာ တော်တော်လေး ကောင်းနေလောက်ပါပြီ။ ဆက်ပြီး လေ့ကျင့်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ စကားပြောဖေါ်တွေနဲ့ ပိုပြီး လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ အကြောင်းပြောပါ။ တစ်ရက်ကို စကားလုံး အလုံး(၃၀)ကို လည်း ဆက်ပြီး ကျက်မှတ်ပါ။ ကိုယ်တတ်ပြီးသား စကားလုံးတွေကိုလည်း မပြတ်လေ့ကျင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် စာလုံးပေါင်း အလုံး (၃၀၀၀) ကို တတ်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီဘာသာစကားကို ချောမွေ့သွက်လက်စွာ ပြောနိုင် သလောက် ဖြစ်သွားမှာပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ ဒီဘာသာစကားနဲ့ ပြတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေ၊ စာအုပ်တွေကို စပြီးတော့ ကြည့်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ ဒီဘာသာစကားပြောတဲ့ DVD တွေ ငှားပြီး နားလည်အောင် လိုက်ကြည့်ပါ။ လိုအပ်ပါက စာတမ်းထိုးတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကြည့်တဲ့အခါ အဆင်မပြေသေးရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကို နားလည်အောင် ကြည့်ခြင်းက တစ်ယောက်ချင်း စကားပြောရတာထက် ပိုခက်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဒီဘာသာစကားကို (၂)နာရီ (၃)နာရီ ခန့် ဆက်လေ့ကျင့်ပါက လကုန်တဲ့အခါ ဒီဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်း နားလည်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အာရုံသာ ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် ရက် ၉၀ အတွင်းမှာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် သင်ဖြစ်ထွန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ပြောပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ (သို့) မည်သည့် ဘာသာကိုမဆို သင်ယူရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ ဇွဲရှိဖို့နှင့် အချိန်ပေးသင်ယူဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာရော အခြားနည်းလမ်းကောင်းတွေ ရှိပါလား။ ရှိရင် အောက်က comment box မှာ ရေးပြီး အခြားသူများကို လမ်းညွှန်ပေးပါလို့ ပြောလိုပါတယ်။
Lifehacker.com မှ Maneesh Sethi ၏ How I LearnedaLanguage in 90 Days ကို ကိုးကား ဘာသာပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။